Fotoam-bita… tsy mahaleo ny sampona | NewsMada
Fotoam-bita… tsy mahaleo ny sampona
Par Taratra sur 15/05/2017
Mbola misy azo arenina ihany ve ny fahavoazana amin’ny efa sampona sy tsy nety hatrany am-boalohany? Faran’izay mampiteny ny moana ny fahasamponana amin’izao fitondrana izao: mahaleo izay fotoam-bita, na inona lazaina.
Eo, ohatra, ny hoe antoko mbola tsy teraka tamin’ny fifidianana depiote, nefa hoe maro anisa indrindra eny amin’ny Antenimierampirenena. Noho ny fividianana olona na kolikoly? Tsy mamela ny Bianco hanadihady ifotony ny birao maharitra.
Matanjaka indrindra amin’ny antoko? Ny tanjany no nahazoany fitondrana raha tsy mbola teraka akory izy sa ny fahazoan’ny fitondrana no mampatanjaka azy noho ny fampiasana fahefam-panjakana ho an’ny antoko manokana?
Mahatsiravina sy maharikoriko amin’ny politika ny hosoka sy hala-bato tamin’ny fifidianana ben’ny Tanàna sy ny fifidianana loholona, taona 2015. Fahasamponana izay lazaina ho tanjaka. Mitanjaka tanteraka raha vakina bantsilana ny marina.
Fahasamponana mampandringa koa ny fanosihosena ny And. 54 amin’ny lalàmpanorenana amin’ny fanolorana Praiminisitra. Ny And. 72 amin’ny tsy fahazoan’ny depiote mivadika vondrona politika, nefa nohamafisin’ny HCC.
Sampontsampona hatrany izay iainan’ny vahoaka, amin’izao fitondrana izao: tantsaha norarafana baomba mandatsa-dranomaso noho ny fitakiany ny taniny tany Soamahamanina, ny fivarotan-tanindrazana afitsoky ny mpitondra…
Eo koa ny firongatry ny dahalo anjatony sy anarivony, ny fisondrotry ny vidin-tsolika saika isam-bolana, ny delestazy lavareny, ny fitsaram-bahoaka, ny ady tany sy fandroban’ny vahiny tany sy ny harem-pirenena…
Tsy hita izay tena vahaolana amin’izany. Vitavita ho azy? Toy ny « Raharaha Anjozorobe », fakana olona an-keriny tany Toamasina, « Raharaha Antsakabary« , baomba nipoaka teny Mahamasina ny 26 jona 2016, « Raharaha R. Claudine« …
Mbola be ny azo tanisaina… Tsy mahaleo ireo fahasamponana rehetra ireo efa hatrany am-pahaterahana izay fotoam-bita. Tratra aoriana, na inona fampanantenana: efa hita ny vita. Mbola azo inoana sy heverina ho inona izay lazaina sy atao?